ကတ်ကြေးတစ်ချောင်းနဲ့ တိခနဲ ဖြတ်ချလိုက်သလို .. ပြတ် သား မှု
ရုပ်တရားတွေဟာ ရုပ်ဝတ္ထုစော် နံနေပြီး ၊ နာမ်တရားတွေက နံစော်နေတယ်
ပြန်ခေါ်နေတယ် ၊ သေခြင်းတရားက အိပ်မက်ထဲထိ လာလာပြီး ပြဲပြပြူးပြ
နင်လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေရအောင် နင်က ပုခုံးပေါ် ကြယ်ပွင့်တွေ တင်ထားသလား ၊
ငါ့ပုခုံးမှာတော့ လှည်းကျိုးရာ အထပ်ထပ် တဖြတ်ဖြတ် ပြန်မြင်ယောင်လာ
တဲ့ အတိတ်ဟောင်းမှာ စိတ်မကောင်းစရာတွေ ပုံ လို့ ၊ အရင်စိတ်နဲ့သာဆို
ဗြင်းပြီးသားပဲ ကိုယ့်လူ သူ့လူ ခွဲခြားမနေပါနဲ့ ၊ တွဲထားမနေပါနဲ့ ၊ လက်တွေ
ဟာ ဘယ်လိုမှ မခိုင်မြဲတော့ဘူး ၊ ကိုင်ဆွဲထားတဲ့လက်တွေ ယိုင်လဲသွားရင်တောင်
ဒိုင်ပဲ စားမှာ ၊ ဟေး ဟေးးးးးးးးး ဟေးးးးးးးးးးးးးး အဲ့ဒီလို ကိုယ် အကျယ်ကြီး ကား
ခနဲ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ချောက်နက်ကြီး ၊ မာရီယာနာ ဆိုလား ဘာဆိုလား ချောက်
နက်ကြီး ၊ နတ်ကြီးပါတယ် ဆိုတဲ့ ချောက်နက်ကြီး ၊ ချောက်ဆိုပြီး အသံမြည်သွားတဲ့
ပန်းသီးလေး ၊ ခါးလိုက်တာ မေမေရယ် ၊ ရာသီဥတုက အရှင်လတ်လတ် သင်္ဂြိုဟ်ခံ
နေရသလိုမျိုး ၊ နက္ခတ်နဲ့ ပါဝါ အကျ လွဲတဲ့ ကောင်းကင်မှာ ကိုယ်ဟာ အမည်မဖော်
လိုသူ သက်တန့် ၊ ရောင်စဉ်ခုနစ်သွယ်ဟာ သီတာခုနစ်တန် ခြားထားသလိုမျိုး ၊
ဝေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး လွန်းတယ်
ဧပြီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၂ ။
ရေးသားသူ ဆူးခက်မင်း ရေးချိန် 4:59 AM 1 မှတ်ချက်များ
ထရပ်ကားပေါ်က အက်ဆေးများ (၁)
ကျွန်တော်ပင်လယ်ဆီကို သွားနေတယ် ။
ပင်လယ်ဆိုတာအလုံးကြီးလား အပြားကြီးလား ၊
မော်တော်ကားလို ဘီးလေးဘီးနဲ့လား ၊ အေးချမ်းမွန်လို
သွားတက်လေးပါလား ၊ ကျွန်တော် မသိဘူး ။ ကျွန်တော်
ပင်လယ်ဆီကို သွားနေတယ် ။ ပင်လယ်ဆိုတာ ဘယ်အရပ်
ဘယ်ဌာနမှာ ရှိမှန်း ကျွန်တော် မသိဘူး ။ ပင်လယ်ဆီသွားဖို့
လမ်းညွှန်မြေပုံလည်းမပါဘူး ။ ကျွန်တော့် သိမှုထဲမှာ ရှိနေတာ
တစ်ခုက ၊ ကျွန်တော် ပင်လယ်ဆီ အရောက်သွားဖို့ပဲ ။ ပင်လယ်ရဲ့
သဘော သဘာဝ ၊ ပင်လယ်ရဲ့ အနှစ်သာရ ၊ ပင်လယ်ရဲ့ ဖြစ်စဉ် ၊
ကျွန်တော် ဘာဆို ဘာမှမသိဘူး ။ ဒီလိုဆိုတော့ ကျွန်တော်
ပင်လယ်ဆီ သွားနေတယ် ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့က မယုံကြည်နိုင်ဘဲ
ဖြစ်လိမ့်ဦးမယ် ။ ကျွန်တော် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောနိုင်တာ တစ်ခုက
ကျွန်တော် ပင်လယ်ဆီသွားနေတယ် ။
ကျုပ်လား . . . အခု ပင်လယ်ဆီ သွားနေတာပါ”
(ကန္တာရသား - နေမျိုး)
သူ သစ်သီးလေး တစ်လုံးကို ခွဲလိုက်တယ် ။ သစ်သီးလေးထဲက
သစ်စေ့လေးထွက်လာတယ် ။ သူ ကလေးပီပီ သစ်စေ့ကလေးကို
လက်နဲ့ တောက်ထုတ်လိုက်တယ် ။ နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြာတဲ့
အခါ သစ်စေ့ကလေးဟာ သစ်ပင် တစ်ပင်ဖြစ်သွားတယ် ။ သူလည်း
အဘိုးအိုတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ် ။ သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာ
ကလေးသူငယ်တွေ ဆော့ကစားနေကြတယ် ။ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာမှာ
ဖြူစင်ခြင်း အရိပ်အယောင်တွေပြည့်လို့ ။ နောင်တစ်ချိန်မှာ အဲ့ဒီ
သစ်စေ့ကလေးတွေဟာ သစ်ပင်တွေ ဖြစ်လာမလားလို့
သူတွေးမိတယ် ။ သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာ သစ်သီးတစ်လုံးရှိတယ် ။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဟစ်အော် ဆော့ကစားနေကြ
(သစ်ပင်အောက်က ကလေးငယ်များ - နေမျိုး)
သူမ မနက် လေးနာရီ အတိမှာပဲ အိပ်ရာက နိုးလာတယ် ၊
မျက်လုံးတွေက ကျင့်သားရနေတာကြောင့် မနက်လေးနာရီ
ဆိုတာနဲ့ အိပ်ရာက နိုးနေတတ်တာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ ။
တစ်ကိုယ်ရည် တစ်ကာယ သန့်ရှင်းရေးကိစ္စတွေ ပြုအပြီးမှာ
မျက်နှာသစ်ဖို့ အိမ်ရှေ့ရေကပြင်ကို ထွက်လာခဲ့တယ် ။ မျက်နှာ
သစ်ရင်း သတိပြုမိတာက သူမရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်က ထင်ထင်ရှားရှား
အရေးအကြောင်းတွေ ။ သူမ အပျိုတုန်းကများ ဒီလို မဟုတ် ၊
ညနေရေခပ်ဆင်းပြီဟေ့ ဆိုရင် ကာလသားတစ်သိုက်
မျက်ဖြူဆိုက်လောက်အောင် လိုက်ပိုးကြတာ ခံခဲ့ရသူ ။
အင်းလေ . . . အသက်လည်း ၇၀ ကျော်နေမှပဲ ဟု တွေးရင်း
ပြုံးမိသည် ။ အဲဒီနောက် မကြာခင်မှာ အရုဏ်ဆွမ်းခံကြွလာမယ့်
သံဃာတော်တွေကို လောင်းလှူဖို့ အတွက် ထမင်းတစ်အိုး
တည်ထားပြီး ၊ ဘုရားရှိခိုးရန် အိမ်ရှေ့ခန်းသို့ ထွက်လာခဲ့တယ် ။
နှုတ်မှ တတွတ်တွတ် ရွတ်ဆို
အဘွားအိုဟာ ဘုရားရှိခိုးစာတွေကို မေ့ပေါ့
ဘယ်တော့မှ စ ၊ လယ် ၊ ဆုံး ကို
(ငါ့အိမ်နားက အဘွားအို - နေမျိုး)
ရေးသားသူ ဆူးခက်မင်း ရေးချိန် 4:58 AM0မှတ်ချက်များ
အဖြူရောင် သုဿာန်မှာ စံပယ်တွေ ဖွေးခနဲ ပွင့်
သူ့တွင် မြွေဖြူလေးတစ်ကောင်ရှိသည် ။ ထိုမြွေဖြူလေးကို
စံပယ်ဟု အမည်ပေးထား၏ ။ မြွေဖြူလေးသည် အထီးလား
အမလား ဆိုတာ သူမသိ ။ သူ့တွင် စံပယ်ဟု အမည်ရသော
သူ့တွင် စံပယ်ဟု အမည်ရသော ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိသည် ။
ထို စံပယ်ဟူသည့် အမည်အား သူမ၏ ဖခင်မှ ပေးထားခြင်းဖြစ်၏ ။
သူမ၏ ဖခင်က စံပယ်ဟူသော အမည်ကိုပေးသောကြောင့် ၊ သူမက
စံပယ်ဟူသော အမည်ကို ယူလိုက်ရ၏ ။ မင်္ဂလာတရားတော်နှင့်
ညီ၊ မညီတော့ မသိ ။ သူမ၏ဖခင်တွင် စံပယ်ဟု အမည်ရသော
မြွေဖြူတစ်ကောင် မရှိချေ ။
စံပယ်သည် အလွန်တရာမှပင် ပါးနပ်လှ၏ ။ သူ့ကိုတွေ့သည့်အခါတိုင်းတွင်
လျှာကလေးထုတ်ပြ၍ နှုတ်ဆက်တတ်လေသည်။ စံပယ်သည် ညအိပ်ခါနီးတွင်
မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို သနပ်ခါးအပြည့်လူးတတ်၏ ။ စံပယ်သည် အိပ်စက်နေ
သောအခါတွင် သူမဟုတ်သည့်အလား မှန်ဘောင်ထဲတွင် ငြိမ်သက်စွာ အိပ်နေ
တတ်သည် ။ စံပယ်သည် တစ်ခါတရံတွင် ဘီယာသောက်တတ်၏ ။ မူးသွားသော
အခါ ဟိုရစ်ဒီရစ်ဖြင့် ပြဿနာရှာတတ်လေသည် ။ စံပယ်အကြိုက်ဆုံးသော
အစားအစာမှာ ဖားကောင်ငယ်ကလေးများဖြစ်သည် ။ စံပယ်သည် မိုးခြိမ်းသံကို
ကြောက်၏ ။ ကြောင်ကိုကြောက်၏ ။ စံပယ်သည် ရော့ခ်ဂီတကို နှစ်သက်၏ ။
ပုလွေသံကို နှစ်သက်၏ ။
သူသည် စံပယ့်ကို ခေါင်းလျှော်ပေးရ၏ ။ သူသည် စံပယ့်ကို ရေချိုးပေးရ၏ ။
စံပယ်နေမကောင်းဖြစ်လျှင် သူပြုစုရသည် ။ စံပယ် အရေခွံလဲလျှင် သူဂရုစိုက်
ရသည် ။ သူသည် စံပယ့် ဘဝဖြစ်၏ ။ စံပယ်သည် သူ့ဘဝ ဖြစ်၏ ။ သူသည်
လူယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်၏ ။ စံပယ်သည် လူမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်၏ ။
စံပယ်သည် မြွေဖြူတစ်ကောင်ဖြစ်၏ ။
တစ်နေ့တွင် သူအားပေးသော မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်
ဖလားရရှိသွားသည် ။ တစ်နေ့တွင် သူချစ်သော စံပယ်သေဆုံးသွားသည် ။ သူ စံပယ့်အား
ကောင်းမွန်စွာ သင်္ဂြိုလ်ခဲ့၏ ။ စံပယ့် ဈာပနပွဲတွင် ဖဲဝိုင်းမပါ ။ ရက်လည်မပါ ။ မည်သည့်
ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းမှ မပါ ။ စံပယ့်ဈာပနအား သူနှင့် စံပယ် နှစ်ယောက်တည်း
ကျင်းပခဲ့သည် ။ စံပယ့်ဈာပန အပြီး တစ်လခန့်အကြာတွင် စံပယ်သေဆုံးသွား၏ ။
သူ့ဘဝထဲမှ စံပယ်ဟူသည့် အမည်နာမ လွင့်စင်ထွက်ပြေးသွားသည် ။ စံပယ် မကြား
နိုင်တော့ ။ သူ့အော်သံများအား စံပယ်လုံးဝမကြားနိုင်တော့ ။ စံပယ်သေဆုံးပြီး
တစ်လခန့်အကြာတွင် စံပယ်သေဆုံးသွားခဲ့သည် ။
စံပယ်သည် လူမိန်းမ တစ်ယောက်ဖြစ်၏။
စံပယ်သေဆုံးပြီး တစ်လခန့်အကြာတွင် စံပယ်သေဆုံးသွားခဲ့သည် ။
ထို့နောက် တစ်လခန့်အကြာတွင် သူသေဆုံးသွားခဲ့သည် ။
သူသည် သူ့ကိုယ်သူ မြွေဖြူတစ်ကောင်ဟု ထင်နေသော
လူယောက်ျားတစ်ဦးဖြစ်သည် ။ သူသည် သူ့ကိုယ်သူ လူယောက်ျား
တစ်ဦးဟု ထင်နေသော မြွေဖြူတစ်ကောင်ဖြစ်သည် ။
ရေးသားသူ ဆူးခက်မင်း ရေးချိန် 4:56 AM0မှတ်ချက်များ
ကတ်ကြေးတစ်ချောင်းနဲ့ တိခနဲ ဖြတ်ချလိုက်သလို .. ပြတ်...